तपाईंको सलाह – Islam Guide
Category: तपाईंको सलाह
डिसेम्बर 29, 2017 Comments
बिरामीको सलाह जबसम्म एउटा मुस्लिममा चेतना र होश हुन्छ, त्यसबेलासम्म उसले अनिवार्य रुपमा सलाह पढ्नु पर्छ, तर इस्लामले मानिसको अवस्था र परिस्थितिलाई सधैं कदर गरेको छ, तीमध्ये बिरामीको अवस्था हो। उपर्युक्त कुरा निम्न उदाहरणले छर्लङ्ग हुन्छ- उभेर सलाह पढ्नु अनिवार्य हो, तर यदि अशक्त छ भने उभिनु पर्दैन, जस्तै… रोगले…
डिसेम्बर 27, 2017 Comments
यात्रीको सलाह यात्रीले यात्रा तथा छोटो विश्रामको बेला जो चार दिन भन्दा कम नहोस्, कसर सलाह पढ्नु सुन्न्त हो। कसर भनेको चार रकातको ठाउँमा मात्र दुई रकात पढ्नु पर्दछ, जस्तै… जुहर, अस्र र ईशाको सलाहलाई मात्र दुई रकात पढ्नु। तर यदि कुनै मुकीम (स्थानीय) इमामको पछाडि सलाह पढिरहेको छ भने…
जुमाको सलाह अल्लाहले जुमाको दिन जुहरको समयमा जुमाको सलाहलाई अनिवार्य गर्नु भएको छ। यो इस्लामको एउटा महत्वपूर्ण संस्कार र साप्ताहिक पर्व हो। सम्पूर्ण मुस्लिमहरु हप्तामा एक पटक एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्, इमामको धर्मोपदेश (खुत्बा) सुन्ने अवसर पाउँछन् र सामुहिक रूपमा जुमाको सलाह पढ्छन्। जुमाको दिनको महत्व- साताको महान र उत्कृष्ट…
सलाहमा एकाग्रता ढोग गरिरहेको बेला भक्त आफ्नो प्रभुसित निकै नजिक हुन्छ। . एकाग्रताको महत्व- एकाग्रता नै उपासनाको प्राण हो। एकाग्रता भनेको अल्लाहको अगाडि तुच्छ र नीच भएर मन र मस्तिष्कलाई उपस्थित राखेर सलाह पढ्नु, कुरआनको पाठ र दुआहरुमा मनन् गर्नु हो। यो महत्वपूर्ण उपासना र उच्च अनुसरण हो। त्यसैले अल्लाहले…
अजान मानिसलाई सलाहको समय भएको सूचना तथा जानकारी दिनको लागि अल्लाहले मुस्लिमहरुका लागि अजान दिन आदेश दिनु भएको छ। शुरुमा सलाहको लागि धेरै प्रतिक्षा गर्नु पर्थ्यो, कसैले कसैलाई पुकार्दैन्थ्यो, किनकि त्यतिबेला अजानको नियमै थिएन। एक दिन यसैको विषयमा सानोतिनो बैठक भयो। कसैले क्रिस्चियन जस्तै संख फुँकने र कसैले यहूदी जस्तै…
जमातको सलाह अल्लाहले पुरुषहरुलाई सामुहिक रुपमा पाँच बेलाका सलाहहरु पढ्ने आदेश दिनु भएको छ। सामुहिक रुपमा सलाह पढ्नेहरुका लागि बढी सवाब (पुण्य) को वाचा गर्नु भएको छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “एक्लै नमाज पढ्नु भन्दा जमातका साथ पढेमा २७ गुणा बढी सवाब (पुण्य) प्राप्त हुन्छ।”…
सुन्नत सलाहहरु के के हुन्? एउटा मुस्लिमले दिनरातमा पाँच चोटि अनिवार्य रुपमा अनिवार्य सलाह पढ्नु पर्छ। तर यी पाँच फर्ज बाहेक केही सुन्नत (गैर-अनिवार्य) सलाहहरु छन् जसलाई पढ्न इस्लामले प्रेरणा दिएको छ। यी सुन्नत सलाहद्वारा अल्लाहको माया पाउन सकिन्छ र अनिवार्य सलाहमा भएको त्रुटीलाई पूरा गर्न सकिन्छ। सुन्नत (गैर-अनिवार्य) सलाहहरु…
सलाहलाई खराब (मकरुह) गर्ने कुराहरु- सलाहको एकाग्रता, मर्यादा र पुण्यमा कमी ल्याउने कुराहरूलाई मकरुह भनिन्छ, यी निम्न हुन्… १. सलाहमा यताउता हेर्नु नराम्रो कुरा हो। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सित सलाहमा यताउता हेर्ने ’boutमा सोधियो, उहाँले भन्नु भयो… “शैतानले मानिसको सलाहमा हिनामिना गर्छ अनि ऊ यताउता हेर्न थाल्छ।” (श्रोत-…
डिसेम्बर 23, 2017 Comments
सलाह भङ्ग गर्ने कुराहरु- सलाह पढिरहेको बेला हात, अनुहार वा कुनै वस्तुसँग खेल्नु नराम्रो कुरा हो। . १- जानेर वा बिर्सेर सलाहका आधारहरु छोड्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ। २- जानी-जानी सलाहका अनिवार्य कुरा छोड्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ। ३- जानी-जानी सलाहमा कुराकानी गर्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ। ४- जोडले हाँस्यो…
सज्दा सहु- सलाहमा हुन गएको त्रुटीहरुलाई पूरा गर्न अल्लाहले यी दुई सज्दाहरु गर्न आदेश दिनु भएको छ। सज्दा सहु कुन बेला गर्नु पर्छ? निम्न लिखित अवस्थामा सज्दा सहु गर्नु पर्दछ- १. यदि बिर्सेर रुकू, सज्दा, कियाम वा तशह्हुद मध्ये केही बढी गर्यो भने सज्दा सहु गर्नु पर्दछ। २. यदि आधार…